Warshad Soo Saara Submersible - Shiinaha Soo Saarayaasha Soo Saara Bamka, Alaab-qeybiyeyaal
Waxaa ugu horreyn loo adeegsadaa injineernimada dowladda hoose, dhismayaasha, dheecaannada warshadaha iyo daaweynta bullaacadaha si looga soo saaro bullaacad, biyaha qashinka iyo biyaha roobka oo ay ku jiraan arrimo adag iyo fiilooyin joogto ah.
Mashiinka bullaacadaha wasakhda ah ee loo yaqaan 'WQ / ES' qashin-qubka fudud ayaa inta badan loo adeegsadaa injineernimada dowladda hoose, dhismaha dhismaha, bullaacadaha wasakhda ah iyo munaasabadaha lagu daweeyo bullaacadaha si loo sii daayo bullaacadaha, biyaha qashinka iyo biyaha roobka oo ay ku jiraan adag iyo fiilooyin gaagaaban.
Engineering injineernimada degmada
Construction Dhismaha dhismaha
Se bulaacada lndustrial
Occasions Waqtiyada daaweynta bullaacadaha si loo soo daayo bulaacada
Biyaha qashinka ah iyo biyaha roobka oo ay ku jiraan adag iyo fiilooyin gaagaaban
Inta badan waxay ku habboon tahay biyo-gelinta magaalooyinka, mashaariicda leexashada biyaha, nidaamyada bullaacadaha bullaacadaha magaalooyinka, mashaariicda daaweynta bullaacadaha, bullaacadaha saldhigga korantada, bixinta dekedda iyo qulqulka, wareejinta biyaha ee shabakadda biyaha, waraabinta bullaacadaha, dhul-beereedka, iwm.
Mashiinka la dhex-dhexaadi karo ee isku-dhafan ayaa leh wax-qabad sarreeya iyo wax-qabad wanaagsan oo wanaagsan. Waxay ku habboon tahay munaasabadaha leh is-bedbeddelka heerka biyaha waaweyn iyo shuruudaha madaxa ee sarreeya. Madaxa isticmaalka wuxuu ka hooseeyaa 20 mitir.